डा. केसीको सत्याग्रहमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको ऐक्यबद्धता, डडेल्धुरा सभापतिले गरे समर्थनको अपिल – Health Post Nepal
डा. केसीको सत्याग्रहमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको ऐक्यबद्धता, डडेल्धुरा सभापतिले गरे समर्थनको अपिल
२०७६ कार्तिक १९ गते १९:१०
चिकित्साशिक्षा सुधार तथा विधिको शासन स्थापनाको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि सुरु गरेको १७औँ सत्याग्रहमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, डडेल्धुराले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । अनशनको दोस्रो दिन मंगलबार कांग्रेसले डा. केसीको सत्याग्रहमा समर्थन जनाएको हो । डा. केसी सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा सोमबारदेखि अनशनमा छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले जिल्ला सदरमुकाममा अनशनरत डा. केसीलाई भेटेर उनको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । भेटका क्रममा उनले डा. केसीको पवित्र महाअभियानमा डडेल्धुरा कांग्रेसको साथ रहेको बताए । साथै, उनले गरिबको स्वास्थ्यका लागि थालिएको डा. केसीको अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीमा अनुरोधसमेत गरे । डडेल्धुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला हो । देउवा ०४८ सालदेखि निरन्तर डडेल्धुराबाट संसद्मा निर्वाचित हुँदै आएका छन् ।
जिल्ला सदरमुकामस्थित डडेल्धुरा अस्पतालबाट एक सय मिटरको दूरीमा रहेको एक निजी घरमा डा. केसी अनशन बसिरहेका छन् । निर्मल क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको सो घरको तेस्रो तलामा साँझ ५ अनशन सुरु गर्नुअघि डा. केसीले सोमबार नै पत्रकारसम्मेलन गरेर आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका थिए ।